Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yembewu Yamagilebhisi | CCGB
Izinto zokusetshenziswa zaseYurophu, ukukhiqizwa okukhulu
Ukukhishwa kwembewu yamagilebhisi kuyimpuphu ebomvu esawolintshi ekhishwe ezimbewini zamagilebhisi ezisezingeni eliphakeme zaseYurophu, ngemuva kokukhishwa okuphikisanayo, ukuhlaziywa kwenhlaka, ukugxilisa ukomisa nokuphunga Isetshenziswa kakhulu kwezokunakekelwa kwempilo, izimonyo nakweminye imikhakha.
Umthombo weBotanical: Imbewu yamagilebhisi yaseFrance
Umsebenzi: Ukukhishwa kwembewu yamagilebhisi kungasusa ngempumelelo ama-radicals amaningi ngokweqile emzimbeni womuntu futhi kunemiphumela emangalisayo ekulweni nokuguga nasekuthuthukiseni amasosha omzimba.
1.Ukuqhathanisa phakathi kwekhwalithi ejwayelekile ye-USP neCCGB
Sample USP isampula ejwayelekile
Ract CCGB Amagilebhisi Imbewu Khipha
3 - (+) - ikhathekini
6 - (-) - i-epicatechin-3-O-gallate
Isiphetho: Uma kuqhathaniswa nesibalo sesampula esezingeni le-USP, izingxenye zesici semikhiqizo yethu ziyahambisana nalezo zesampuli ejwayelekile ye-USP, futhi okuqukethwe kwe-oligomeric proanthocyanidins kuphakeme kunejwayelekile.
2.Ukuhlonza ubuqiniso bokukhishwa kwembewu yamagilebhisi
Ract Khipha imbewu yamagilebhisi yemvelo kusuka kuCCGB
Ext Khipha imbewu yamagilebhisi exutshwe ne-1% Peanut Skin Extract
Ext Khipha imbewu yamagilebhisi exutshwe ne-1% Pine Bark Extract
Isiphetho:UKUDLULWA KWEMBEWU YOMVINI WEMVELO kunamanani aphakeme ayisi-7 futhi isiqongo sesici se-OPC siyalingana, kuyilapho uma ixutshwe nesikhumba samantongomane noma ukukhishwa kwegxolo likaphayini, isibalo sihluke ngokuphelele. I-CCGB inikezela ngokukhishwa kwembewu yamagilebhisi yemvelo kuphela futhi ingahlukanisa uma isampula lingu-100% wemvelo.
1.Sikhetha imbewu ephezulu yamagilebhisi yaseFrance njengempahla eluhlaza, ukuze umkhiqizo ube nekhwalithi enhle nokuqukethwe okuphezulu kwama-oligomeric proanthocyanidins. Isici sokuhlolwa esikhethekile futhi esikhethekile kufakazela ikhwalithi yomkhiqizo wethu futhi sinikeza isiqinisekiso kumakhasimende ethu.
2.Made From European Premium Amagilebhisi Imbewu
Sithenga cishe amathani ayi-5 000 embewu yamagilebhisi esezingeni eliphakeme yaseYurophu unyaka nonyaka, ukuze umkhiqizo ube nokuqukethwe kwekhwalithi enhle nokuqukethwe kwama-oligomeric proanthocyanidins. Isici nokuhlolwa okuhlukile kufakazela ikhwalithi yomkhiqizo wethu futhi kunikeza isiqinisekiso kumakhasimende ethu.
3.Large-scale, Okuqhubekayo Futhi okuzenzakalelayo Production
Ngemishini yokuzikhandla eqhubekayo yokuziphilisa, singondla amathani angama-30 ngezinto zokusetshenziswa ngosuku olulodwa, ezinganikeza amakhasimende ukuhlinzekwa okuzinzile kwemikhiqizo.
I-Proanthocyanidins Yamagilebhisi I-Proanthocyanidins 95
Amagilebhisi Imbewu Khipha i-Polyphenol 80%
1kg Alu Bag * 25 / ibhokisi isigubhu
Langaphambilini Ijinja extrac